Wax walba oo ku saabsan Fasoracetam
1. Waa maxay Sermorelin Acetate?
3. Faa'iidooyinka qaadashada Sermorinin Acetate
4. Sideen u isticmaali karnaa Sermorinin Acetate?
5. Goorma ayaan arki karnaa natiijooyinka Sermorin Acetate?
6. Sermorelin Acetate Waxyeellooyinka soo raaca
7. Meesha ugu fiican ee lagu iibsado Sermorinit Acetate
Sermorelin acetate waa rug caafimaad oo qaabdhis ah oo la mid ah hormoonka koritaanka dabiiciga ah ee sii deynaya hormoonka (GHRH).
Sermorelin acetate waxaa loo yaqaanaa awoodda ay ku kicin karto qanjirada pituitary si ay u soo saarto iyo sidoo kale qarsoodi ah hormoonada koritaanka.
Sermorelin Acetate (86168-78-7) waa qaab isku-dabiici ah oo loo yaqaan 'peptide hormone peptide' kaasoo ka kooban kiimiko ah 29. FDA waxay u ogolaatay daawadan daaweynta carruurta, laakiin dawooyinka badan ee adduunka oo dhan waxay isticmaalaan Sermorelin Acetate off label si kor loogu qaado heerarka hoormoonka koritaanka ee bukaanka qaangaarka ah.
Si ka duwan noocyada kale ee HGH, Sermorelin Acetate waxaa loo isticmaali karaa calaamad. Dhanka kale qiimaha Sermorelin way yar tahay marka loo eego daroogooyinka kale ee la midka ah. Daawadan ayaa sidoo kale loo qoraa in la isticmaalo habeenkii waana in la qaato ugu yaraan hal saac ka hor ama ka dib markaad cunto qaadato. Qaadashada Sermorelin Acetate habeenkii waxay hubisaa in si buuxda u dheellitiran wareegaaga dabiiciga ah ee hormoonka koritaanka iyo sidoo kale in la kiciyo qanjidhada 'pituitary' oo dhan inta lagu jiro hurdo REM. Dhanka kale, Sermorelin Acetate waxaa laga helaa laba nooc, taas oo ah Oral Sermorelin diyaargarowga iyo lyophilized foomka loo mudo.
Shaqada Sermorelin iyadoo kicinaysa hormoonka hormoonka kobcinta jirka oo badanaaba loogu talagalay carruurta leh hurgumada hormoonka. Inkastoo daroogada loo oggolaaday isticmaalka carruurta, haddana dhakhaatiirtu waxay sidoo kale garwaaqsadeen in Sermorelin sidoo kale muhiim tahay oo waxtar leh marka loo qoro dadka waaweyn. Tusaale ahaan, dadka waaweyn La dagaalanka Sermorelin halka kuwo kale ay ku raaxaystaan ​​Sermorelin iyo miisaan lumis. Daroogadu waxay kicisaa qanjidhada qanjirka 'pituitary' si ay u soo saaraan hormoonada koritaanka ee jirkaada.
GHRH waa peptide oo ka kooban 29% amino acids kaas oo ku jira hormoonada koritaanka. Astaamaha amino-ku waa kuwa ugu waxtarka badan ee GHRH. Guud ahaan, sida dadka da'da ah, hormoonnada koritaanka ee qarsoodi ah ee muraayadda pituitary ah oo inta badan baaritaanno ay sameeyeen khabiiro caafimaad oo kala duwan ayaa xaqiijiyay in Sermorelin ay awood u leedahay dib u soo celinta heerarka hoormoonka koritaanka jidhkaaga ee heerarka dhalinyarada adigoo kor u qaadaya IGF-1 ( Isbedelada Insulin-Sida Kobaca 1).
Si kastaba ha ahaatee, habka ugu wanaagsan ee lagu heli karo faa'iidooyinka Sermorelin acetate waa inaad qaadato qiyaasta saxda ah iyo sidoo kale raac tilmaamaha qiyaasta dhakhtarkaaga. Daroogada xad dhaafka ah waxay u horseedi kartaa saameyn la'aan aan laga bogsan karin ama xitaa maadama aad ku sii wadi karto xaaladaha caafimaadka. Xanaan-hoosaadka ayaa sidoo kale kuu diidi doona fursadda inaad ku raaxaysato faa'iidooyinka Sermorelin acetate. Sida ugu fudud ee aad si fudud u geli karto daroogada internetka ama xitaa farmashiyaha, ha bilaabin qaadashada daawada adigoon marin baaritaan caafimaad.
Inkasta oo Sermorelin qiimeeyo wuxuu ka hooseeyaa daawooyinka la midka ah ee suuqa, wuxuu keenaa natiijooyin tayo leh. Waxaa jira noocyo kala duwan Natiijooyinka Sermorelin Acetate in dadka isticmaala ama bukaanada si sax ah u qaata oo raacaan tilmaamaha dhakhtarka. Mid ka mid ah faa'iidooyinka muhiimka ah ee isticmaalka daroogada ayaa ah inaad adigu dooran karto foomka qiyaasta ee adiga kugu habboon. Waxaa jira qiyaasta afka ah haddii aadan ku qanacsanayn cirbadaha waxaana aad aadi kartaa daawada laysku duro, laakiin natiijooyinka waa isku mid. Dib-u-eegista Sermorelin Acetate ayaa sidoo kale ah meesha ugu fiican ee la eego faa'idooyinka ay isticmaaleyaasha qaarkood ku raaxaystaan ​​ka dib qaadashada daawadan. Waxaa jira faa'iidooyin kale oo muhiim ah oo aad ku raaxeysan karto inaad qaadato daroogada, waxaana ka mid ah:
★ Sermorelin Acetate si ay ula dagaallanto Saameynta Waayeelka
Daawadani waxaa sidoo kale loo tixgeliyaa inay tahay mid ka mid ah waxyaabaha ugu wanaagsan ee lagaga hortagi karo suuqyada maxaa yeelay waxay ka caawisaa kor u qaadidda unugyada iyo unugyada waxyeelada leh ee jirkaada. Tani waxay xajineysaa maqaarkaaga xaalad fiican iyo sidoo kale dhalinyaro, taas oo yareyneysa saameynaha waayeelka sida xariijimo ganaax ah oo ku saabsan maqaarka iyo qaybaha daciifka ah. Heerarka hoose ee hoormoonka korriinka waxay keeneysaa in aad isbedel ku sameysid muuqaalkaaga waxaana loo yaqaanaa sababta ugu weyn ee keenta maqaarka ama maqaarka iyo maqaarka. Inta badan Sermorelin Dib-u-eegista qarsoon waxay muujinayaan in dadka isticmaala daroogada badan ay ku faraxsan yihiin natiijooyinka si ay u cirib tiraan calaamadaha da'da.
Caalamka, malaayiin qof La dagaallanka gabowga iyadoo Sermorelin iyo natiijooyinka ay aad u qosol badan yihiin. Sermorelin waxay sidoo kale dib u soo celisaa hawlaha caadiga ah ee jidhkaaga adoo dejiya dhammaan dhibaatooyinka keena HGH aan ku filneyn. Awoodda daroogada ee bilaabaysa jawaab celinta jirka ee caadiga ah iyo habka difaaca oo ka jawaabaya heerka sare ee HGH waxay u saamaxdaa dadka isticmaala inay hagaajiyaan muuqaalkooda ayna sidoo kale yareeyaan calaamadaha da'da.
★ Sermorelin Acetate for Dhimashada Miisaanka
Daraasado kala duwan oo ay sameeyeen aqoonyahanno kala duwan ayaa aasaasay dadka waawayn ee ku xeel-dheer buurnaanta iyo miisaanka lumitaanka waxay yeelan karaan heerar hoormoon hooseeya marka loo eego kuwa culeyska caafimaadka leh. Dhab ahaan, dad badan ayaa doorbidaya Sermorelin iyo miisaanka oo yaraada qiyaasta miisaankooda. Sermorelin acetate waxa lagu caddeeyey inay tahay daroogada saxda ah si ay u caawiso dadka miisaankoodu badan yahay in ay miisaankiisu kor u dhaafaan iyada oo loo marayo kicinta wax soo saarka hoormoonka jirka. Daawada ayaa sidoo kale la xiriirta kororka hoormoonka koritaanka jirka, taas oo keentay horumarinta lafaha laf dhabarta iyo murqaha iyo sidoo kale yareynta dufanka jirka. Wixii macluumaad dheeraad ah, kala tasho daawooyinkaaga miisaankaaga ama dhakhtarka caafimaadka.
★ Faa'iidooyinka kale ee Sermorelin Acetate
Waxaa sidoo kale jira faa'iidooyin kale oo aad ku raaxeysanayso inaad si sax ah u qaadato daroogada awoodda leh, waana sida soo socota;
Cufnaanta Macdanta La Macmiilay; Daraasadaha Sermorelin waxay cadeeyeen in la'aanta HGH la'aanta sidaas darteed dadka qaangaarka ah waxay keenaysaa hoos u dhaca lafaha lafaha, taas oo kor u qaadeysa khatarta ah jirrooyinka laftirka (osteoporosis). Qaadashada Sermorelin ee ku saabsan bilaha 12 ama in ka badan waxay hagaajin kartaa cufankaaga laf ahaantaada iyo sidoo kale yareynta fursadaha horumarinta lafdhabarta.
Horumarinta Xoogga Muruqyada; Sababtoo ah isbeddelada daroogada oo ka dhigaysa jirkaada, marka la eego kor u qaadidda hormoonka koritaanka hormarka, taas oo keenta dhismaha murqaha, waxay sidoo kale kordhisaa awoodda muruqa. Waxaad la kulmi doontaa natiijooyin wanaagsan ka dib markaad qaadato daroogada ku saabsan bilaha 12.
Hagaajinta jinsi kaxeynta: shakhsiyaadka leh hormoonada hormoonnada ee hooseeya waxay badanaa leeyihiin dhibaatooyin la xiriira libido sababtoo ah heerarka tamarta jidhka oo hooseeya. Inta badan dadka waaweyn ee isticmaala Sermorelin acetate waxay soo sheegaan hagaajintooda jimicsigooda jinsiga iyo sidoo kale helista xalka neefsashadii hore.
Hagaajinta dhumucda maqaarka; dhimista maqaarka maqaarka iyo natiijooyinka dhumucda ee heerarka hoormoonka koritaanka hoose ee jirkaaga. Nasiib wanaag, Sermorelin Acetate waa daaweynta ugu fiican si loo xalliyo dhammaan xaaladaha maqaarkan.
Metabolismism; Koritaanka hormoonka koritaanka ee nidaamka jirkaaga wuxuu keenaa in yaraanta dheef-shiid kiimikaad, iyo daaweynta Sermorelin Acetate waxay ka noqon kartaa xaaladdan. Daaweynta HCGH waxay sidoo kale ka ciyaareysaa door muhiim ah oo lagu kordhinayo kordhinta unugyada borotiinka ah, si caadi ah loo isticmaalo dheef-shiid kiimikaad karbohidratka, iyo in lagu xoojiyo oxidation-ka iyo sidoo kale dhimista kolesteroolka xun. Saamaynta dheef-shiid kiimikaad ee hagaajinta heerarka HCG waxay sidoo kale keenaysaa caafimaad wanaagsan iyo isugeyn.
Qaar ka mid ah faa'iidooyinka kale ee guud ee Sermorelin Acetate waxaa ka mid ah; adkeysiga sii kordhaya, xajmiga jidhka oo kor u kacay, hagaajinta nabarka bogsashada, kor u qaadista difaaca iyo caafimaadka wadnaha, iyo hurdada tayada leh.
Isticmaalka daroogo kasta oo dheeraad ah sidaas Sermorelin Acetate waa in lagu hagaa oo uu maamulaa dhakhtarkaaga ka dib markaad baaritaanka caafimaad qaadato. Mararka qaarkood qiyaasta ku qoran calaamaduhu waxay noqon kartaa mid ama ka yar iyadoo ku xiran heerka heerka aad u baahan tahay inaad daaweyso. Daawadaadu waa inay, sidaas darteed, u sameyso qiyaasta saxda ah iyo wareegga natiijooyinka wanaagsan. Qiyaasta ugu weyn waxay ku xiran tahay waxa aad u baahan tahay inaad ku gaarto tusaale ahaan Sermorelin iyo miisaan lumis qiyaasta laga yaabo in ay ka duwan tahay Dagaalka Looga Dhaqmayo qiyaasta Sermorelin. Had iyo jeer iska hubi inaad raacdo dhammaan tilmaamaha uu bixiyay dhakhtarkaaga iyo inaad walwal ka qaadato isaga / iyada kahor intaadan bilaabin qaadashada qiyaasta Sermorelin Acetate.
Caadi ahaan, Sermorelin Acetate waxaa lagu maamulaa duritaanka guriga, xafiiska dhakhtarka, ama xataa rugta caafimaadka ee kuugu dhow. Haddii kale, daawadaada ayaa ku tababaran karta sidii aad iskugu duri lahayd gurigaaga halkii aad ku sameyn lahayd booqasho joogta ah ee rugta qiyaasta. Si kastaba ha noqotee, markaad isku durto qiyaasta, hubi inaad raacdo habka cirbadeynta si sax ah sida loo isticmaalo daawada. Dareemidda ama xitaa cillado aan sax ahayn waxay keeni kartaa waxyeelo daran, taas oo aan ahayn waxaad filayso markaad qaadato Sermorelin Acetate. Sidoo kale, xasuuso in aad tixgeliso kuwan soo socda markaad qaadato daroogada;
Iska hubi haddii Sermorelin Acetate uu yahay mid la yiraahdo ama uu ku jiro qaybo ka mid ah, haddii sidaas markaa ha isticmaalin. Dhinaca kale, haddii shaaha uu waxyeello ama dillaaco, sidoo kale ka fogow daroogada isla markaana u sheeg dhakhtarkaaga markiiba hagid.
Marna ha gariirin Sermorelin acetate markaad isku dardarayso.
Mar walba hubi in adiga ku duri Sermorin acetate ka dib markii la isku qasay. Waxa kale oo lagugula talinayaa in aad iska tuurto daawada aan la isticmaalin.
Haddii aad isticmaasho wax kale oo dheeri ah hormoonka koritaanka, waa inaad joojisaa qaadashada ugu yaraan hal usbuuc ka hor intaadan bilaabin inaad qaadato qiyaasta daawada Sermorelin acetate. Dhammaan su'aalahaaga ama walaacaaga la xariir daawooyinkaaga ama farmashiistaha sidoo kale u sheeg asaga / ayada haddii aad daawo ku jirto xaalad caafimaad ama mid kale. Tani waxay fududeyneysaa dhakhtarkaaga inuu ku siiyo talo sax ah maaddaama daroogooyinka qaarkood ay faragelin karaan Sermorelin ee jirkaada.
Marwalba, hubi inaad daryeeshid dawooyinka, cirbadaha carruurta ka baxsan oo ka fog xayawaankaaga. Weligaa ha u isticmaalin irbadaha ama walxaha kale ee aad u isticmaasho marka aad maamuleysid Qiyaasta Sermorelin. Muuqaal kale oo muhiim ah ayaa ah sida aad u saari lahayd sheyga ka dib isticmaalka. La tasho dhakhtarkaaga, si aad kuula taliso sharciyada ugu fiican iyo kuwa maxaliga ah si loo saxo alaabta daawooyinka ee deegaankaaga.
Haddii ay dhacdo in aad seegto qiyaasta Sermorelin Acetate, hubso inaad qaadato waqtiga ugu gaaban ee suurtogalka ah. Si kastaba ha noqotee, haddii aad dareentid goor dambe marka ay ku dhowdahay qiyaasta soo socota, waad ka boodi kartaa qiyaasta qallooca oo aad u guurto dhinaca soo socda. Ha qaadin qadar labajibbaaran si loo magcaabo midka maqan tan iyo markii uu ka badnaan doono oo uu keeni karo in uu horay wax uga qabadsiiyo. Waxaad sidoo kale u sheegi kartaa dhakhtarkaaga inuu kugula talin doono markaad ogaato inaad qadatay qiyaastaada.
Intaa waxaa dheer, for Sermorelin iyo Miisaanka lumid waxay noqon kartaa fikrad wanaagsan haddii aad raacdid qiyaasta cuntooyinka saxda ah iyo jimicsiga.
(1) Waa maxay nooca Sermorelin Acetate?
Daawadani waxay ka jirtaa laba nooc oo asaas ah, oo ay ku jiraan cirbada iyo diyaarinta afka, laakiin labadaba waxay keenaan natiijooyin isku mid ah. Foomamka waxaa ka mid ah;
♦ Liophilized foomka la isku mudo -Tani waa nooca la isku duro ee Sermorelin Acetate, taas oo macnaheedu yahay in kaliya lagu maamulo irbado. Waxaad isku duri kartaa naftaada ama jadwalka booqashada joogtada ah ee rugtaada daaweynta si aad u maamusho qiyaasta. Xaalado badan, dhakhtarkaagu wuxuu ku tababaran doonaa sidii aad iskaga maareyn lahayd gurigaaga sababtoo ah waa inaad qaadataa daawada ku saabsan bilaha 12 ama in ka badan.
♦ Diyaargarowga afka -Kani waa foomka Sermorelin ee afka, taas oo macnaheedu tahay inaadan khasab kuguma aha inaad mariso xanuunka cirbadaha. Waxaad dooran kartaa foomka dawada ee ugu fiican, adiga oo ku xiran waxa aad ku raaxaysantahay. Haddii aadan ku haboonayn cirbadaha, waxaad had iyo jeer weydiisan kartaa dhakhtarkaaga inuu kuu qoro qiyaasta afka. Xasuusnow, ma qaadan kartid qiyaasta daaweynta iyo daawada labadaba isla waqti isku mid ah.
(2) Kahor Isticmaalka; waxaad u baahan tahay inaad ogaato?
Waxaad u baahan tahay inaad taxaddar badan sameyso markaad qaadato hormoonkan sii korodhsan ee daroogada sii deynaya illaa iyo haddii aan si sax ah loo qaadin waxay keeni kartaa waxyeelo daran. Ha iibsanin Sermorelin Acetate farmashiyaha ama xitaa goobaha internetka oo aad bilowdo adigoo isticmaalaya taladaada daawada. Xasuusnow, meydka bini'aadanku way ka duwan yihiin, sababtoo ah daroogadaasi waxay u shaqaysay saaxiibkaaga, ma aha mid si toos ah uugu wanaagsan inaad si fiican kuula socoto. Taasi waa sababta loogu talagalay in loo maro baaritaan caafimaad oo sidoo kale u ogolaato xirfadlahaaga caafimaad inuu kuu sameeyo qiyaasta saxda ah ee adiga kugu habboon. La socodsii dhakhtarkaaga, haddii aad daawo kale leedahay sababtoo ah daroogooyinka qaarkood si fiican uma shaqayn karaan Sermorelin Acetate. Qaar ka mid ah xaaladaha caafimaad ee aad u baahan tahay inaad u sheegto dhakhtarkaaga haddii aad haysato;
Haddii aad qorsheyneysid inaad uur yeelato ama aad horeba uur leedahay ama xitaa haddii aad naas nuujiso. Tani waxay ka caawin doontaa dhakhtarkaaga inuu kuu sameeyo qiyaasta ugu fiican si aad u hubiso in daroogadu aysan saameynaynin ilmaha caloosha ama ilmaha.
Haddii aad qaadato wixii daawo ah ama daawo rijeeto ah, cunto dheellitiran, ama haddii aad qaadanayso diyaarinta dhirta. Daawooyinka qaarkood ayaa laga yaabaa inaysan si fiican ugu shaqeyn Sarmorin Acetate, waana fiicantahay inaad u sheegto daawadaada inta aadan bilaabin cirbadda ama qiyaasta afka.
Haddii aad xasaasiyad ku leedahay cuntada, daawooyinka, ama walxaha kale.
Sidoo kale, u sheeg dhakhtarkaaga haddii aad qabatay dhaawac maskaxda ah ama madax xanuun iyo cudurro aad daaweyn u leedahay ama mararka qaarkood dib u soo laabatay.
Daawooyinka qaar ayaa si fiican ula qabsan kara Sermorelin Acetate, halka kuwa kalena ay yareeyaan waxtarka daroogada. Sidaa darteed, sida hore loo sheegay, waxaa wanaagsan in aad u sheegto dhakhtarkaaga daawooyinka kale ee aad qaadanayso si lagula taliyo. Qaar ka mid ah daawooyinka waxay kugula talin karaan inaad marka hore dhammaystirtid daawooyinka aad hadda qaadato ka dibna bilaabieyso inaad qaadato Sermorelin Acetate ama haddii aysan wax saameyn ah ku yeelaneynin labada daawo hal mar. Ha ka waaban inaad u sheegto bixiyaha caafimaadkaaga haddii aad isticmaalayso daroogooyinka soo socda;
Cudurka Cyclooxygenase, sida indomethacin iyo aspirin, glucocorticoids sida prednisone, Insulin, ama daawooyinka hoos u dhigi kara heerka qanjidhka jirka sida Propylthiouracil. Qaar kale waxaa ka mid ah daawooyinka somatostatin oo ku jira daawooyinka somatostatin sida levodopa, iyo clonidine tan iyo markii ay yareeyaan awoodda Sermorelin oo aanad ugu yaraan dareemin Natiijooyinka Sermorelin Acetate xitaa ka dib qaadashada daawada muddo dheer.
Liiska daroogooyinka saameyn kara Awoodda Sermorelin Acetate ee ka shaqeysa jirkaaga waa mid aad u dheer, waana sababta ay marwalba muhiim u tahay inaad u sheegto dhakhtarkaaga daawooyinka aad qaadato natiijooyin wanaagsan. Mararka qaarkood, xitaa daawooyinka aad u malaynayso inaysan saameynin, sida daawooyinka dhirta ah waxay keeni karaan waxyeelo daran. Ha isku halaynin haddii aad u baahato in aad hesho natiijooyin fiican iyo natiijada ugu sareysa. Si aad u noqotid badbaado sidoo kale hubso inaad ku lug yeelato dhakhtarkaaga habka daaweynta oo dhan. Baaritaanka caafimaadka ayaa door muhiim ah ka ciyaaraya kahor, inta lagu jiro iyo ka dib dhamaystirka wareegga qiyaasta.
Waxaa intaa dheer, tijaabooyinka shaybaarka waxaa sameyn kara dhakhtarkaaga si loo kormeero heerarka hoormoonka koritaanka, saameynaha, iyo horumarka daaweynta. Iska hubi inaad maamuusatid dhammaan dhakhtarkaaga ballanqaadka mudnaanta ugu sarreysa ee Sermorelin Acetate. Dumarka, haddii aad dareentid inaad uur leedahay muddada aad qaadanaysid, isla markiiba u sheeg daawada. In kastoo, ma cadda sababta ay daroogadu u sameyn karto ilmahaaga ama ilmaha caloosha, maaha amaan ah inaad sii wadato qaadashada Sermorin Acetate markaad naas nuujinayso ama uur leedahay. Hase yeeshee, waa marka baaritaanka caafimaadka ka dib marka dhakhtarkaagu kuu wadi karo. Ha sii wadin qaadashada qiyaasta marka xaaladdan la joogo adigoon u sheegin daawadaada.
HGH iyo IGF labadaba si qarsoodi ah looma hayo oo aan joogto ahayn. Sidaa daraadeed, baaritaan dhiig oo aan kala sooc lahayn iyo falanqeyntu ma noqon karto mid ku filan si loo ogaado haddii Sermorin Acetate uu bilowdo shaqeyn ama aan. Inta badan dhakhaatiirta qora Sermorin Acetate ama daawooyinka la midka ah waxay qiimeeyaan waxtarnimada daawooyinka ayadoo la adeegsanayo calaamadaha, taas oo ah daraasadda calaamadaha lagu falanqeynayo faa'iidooyinka dawada, muuqaalka jirka, iyo baaritaanka dhiigga.
Waxaad bilaabi doontaa inaad la kulanto faa'iidooyinka Sermorelin Acetate kaddib markaad bilowdo inaad hurdadaadu hagaagto iyo tayada qumman ka dib toddoba toddobaad ka dib qaadashada qiyaastaada. Si kastaba ha ahaatee, tani waxay si fudud u ogaan kartaa shaqsiyaadka ay ku adagtahay in ay helaan hurdo tayo leh. Heerarka tamarta jidhka ayaa sidoo kale la kordhin doonaa, niyaddaada ayaa kor loo qaadi doonaa.
Caadi ahaan, bukaanjiif badan ayaa billaabaya isbeddel muhiim ah ee jirka ka dib markii seddex illaa lix bilood oo ah daaweynta Sermorelin Acetate gaar ahaan Sermorelin iyo miisaanka oo yaraada. Qaar ka mid ah saameynaha ugu muuqda ee koritaanka hormoonka kobcinta jirka ee jirka waxaa ka mid ah horumarinta murqaha cufan ee caanaha iyo kor u qaadka caafimaadka jirka guud. Dadka qaangaarka ah ee la dagaallamaya Sermorelin waxay bilaabi karaan inay dareemaan natiijooyinka gudaha bilihii ugu horreeyay ee 3.
Si aad u hesho natiijooyin wanaagsan, waxaad u baahan tahay inaad si joogto ah u durto Sermorelin maaddaama ay si dhakhso ah uga baabi'iso nidaamka jirkaaga. Habka daroogada ee ficilku wuxuu ku xiran yahay inta badan silsiladda fal-celintaada habka bayoolojiga kaas oo horseedi kara wax-soo-saarka hoormoonka koritaanka. Sidoo kale, iyada oo ku xiran nidaamka jirkaaga, waxaad bilaabi kartaa natiijada Sermorelin Acetate ka dib bilaha 3 ama 6 tan iyo markii ay qaadato heerarka hoormoonka koritaanka si uu u shaqeeyo una keeno natiijooyinka la rabay.
Ma jiro wakhti go'an oo ah in Sermorelin Acetate la qaado, laakiin waa inaad yareysaa ama joojisaa isticmaalka daroogada ka dib markaad hesho heerka hormoonka koritaanka hormoonka. Taasi waa sababta imtixaanka shaybaarka ee caadiga ah uu muhiim u yahay kormeerida heerarka hoormoonka. Takhtarkaagu wuxuu noqon doonaa qofka saxda ah si uu u yareeyo ama kugula taliyo inaad joojiso qaadashada qiyaastaada ka dib markaad qaadato baaritaan caafimaad. Qaar ka mid ah bukaanada xitaa waxay qaataan Sermorin Acetate ilaa bilaha 12 ama ka badan intaanay helin heerarka hoormoonka hormoonada.
Inta badan daawooyinka suuqa haddii aaney dhammaantood lahaan waxyeellooyin daaweyn ah oo yar yar ama xitaa daran haddii daawada aan si sax ah loo isticmaalin. Raadinta Sermorelin Acetate dib u eegista qaar ka mid ah dadka isticmaala waxay soo sheegaan astaamaha qaar ka mid ah saameynaha. Si kastaba ha noqotee, bukaanada raacaya tilmaamaha qiyaasta daawada, oo ay maraan baaritaanno caafimaad oo caadi ah, soo sheegaan waxyaabo aad u yar oo Sermorelin Acetate ah.
Waxaa lagugula talinayaa in aad soo sheegto wixii saameyn ah ee hore ee aad la kulantid ka dib qaadashada hormoonkan kor u qaadista daawada. Warka fiicani waa in dhakhtarkaagu kaa caawin karo inaad xakameyso saameynta daawada Sermorelin Acetate haddii aad u sheegto waqtigeeda. Qaar ka mid ah saameynada caanka ah ee laga yaabo inaad la kulanto markaad qaadaneyso qiyaastaada waxaa ka mid ah;
Madax xanuun iyo mararka qaarkood dhadhan qarsoodi ah oo afkaaga ah.
Xanuun, midab, barar, ama casaan ku wareegsan aagga duritaanka.
In ka Dib u eegista Sermorelin Acetate qaar ka mid ah dadka isticmaala waxay muujiyaan niyad-jabkooda iyo khibradda xun ee ay haysteen daroogada oo caadi ah haddii aadan raacin tilmaamaha qiyaasta. Dhibaatooyinka yaryar ee yar-yar ayaa la waayay wakhti, laakiin haddii ay joogaan muddo ka badan wadahadal la filayo dhakhtarkaaga si ay kaaga caawiyaan helitaanka xal kahor intaan xaaladdu ka sii darin. Hase yeeshee, waxaa jira waxyeelo kale oo daran oo markaa la kulma, waa inaad wacdid dawadaada isla markiiba maadaama ay u horseedi karto xaalad caafimaad oo ba'an ama aan dib loo noqon karin. Dhibaatooyinkaas waxaa ka mid ah;
Dareen-celinta xasaasiyadeed ee daran sida finan-yare, finan yaryar, dhibaatooyin neefsasho, xabad xanuun, barar wejiga, dibnaha, afka, ama carrabkaaga.
Kuwani dhammaantood ma ahan saameynaha Sermorelin Acetate ee la filayo inay ka soo baxaan maaddaama qaar ka mid ah ay ku xiran yihiin qofka qaadanaya daroogada. Waxay noqon kartaa fikrad fiican inaad u sheegto dhakhtarkaaga haddii aad aragto wax aan caadi ahayn marka aad qaadanayso qiyaastaada. Si kastaba ha ahaatee, habka ugu fiican ee looga badbaadi karo dhibaatooyinkaan waa in la raaco tilmaamaha qiyaasta daawada iyo sidoo kale in la ixtiraamo dhammaan ballamaha dhakhtarkaaga ee baaritaanka caafimaadka. Xaddiga xad-dhaafka ah ayaa sidoo kale ah sabab kale oo weyn ee saameynta Nafaqo-darrada Calaamadaha Asaasiga ah. Sidaa darteed, haddii aad tuhunsan tahay in aad qaadatay qiyaas ka badan intii laguu qoray, wac dhakhtarkaaga ama booqo xarunta caafimaad ee kuugu dhow ee gargaar.
Habka kaliya ee lagu heli karo natiijooyinka ugu fiican Sermorelin Acetate waa inaad hubiso in aad ka soo iibsato iibiye la isku halleyn karo oo lagu kalsoonaan karo. Haddii aad u baahan tahay inaad la dagaallanto gabowga Sermorelin ama xakameyso miisaanka jidhkaaga, daawada tayada sare leh waxay kuu ballan qaadeysaa natiijada ugu badan iyo natiijooyinka degdegga ah haddii aad raacdo tilmaamaha qiyaasta. Waxaa jira suuqyo badan oo Sermorelin ah oo ku yaal suuqyada, laakiin helitaanka midigtu maaha mid sahlan haddii aanad taxaddar lahayn. Dhakhtarkaagu wuxuu noqon karaa qofka ugu fiican ee kaa caawiya inaad iibsato Sermorin Acetate.
Haddii kale, waxaad raadin kartaa iibiyeyaasha ugu fiican ee internetka ah, laakiin hubi in aad iibso Sermorelin Acetate laga helo shirkadda ugu khibrad badan uguna aaminsan Sermorelin. Ha iibsanin daawooyinka farmashiyeyaasha ama iibiyaha internetka ee aad ku soo gasho internetka maaddaama qaar ka mid ah ay xiiseynayaan in ay sameeyaan faa'iido iyo in aysan laheyn tayada Sermorelin ee ugu fiican oo damaanad qaadaya natiijooyinka aadka u fiican.
Ka hor inta aadan iibsan Sermorelin Acetate, fiiri iibsadaha macaamilka ee iibiya macaamiisha si ay kaaga caawiyaan inaad gaarto go'aanka wargelinta. Waqtigan xaadirka ah, waxaan nahay shirkadda Sermorelin Acetate ugu fiican iyo iibiyaha gobolka. Waxaan samaynaa waqtigii loogu talagalay dhalmada, adduunka iyo annaga Kharashka Sermorelin sidoo kale waa ka hooseeyaa marka loo eego kuwa iibka badan ee suuqa. Waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad sameyso dalabkaaga adoo adeegsanaya casrigaaga, kombiyuutarka ama kiniinka, waxaanan ku siin doonaa alaabtaada ugu gaaban waqtiga suurtogalka ah. Khadadka telefankayaga had iyo jeer waxay furan yihiin 24 / 7, waxaadna hubsan kartaa inaad hesho gargaar deg-deg ah oo ka timaada kooxda adeegga macaamiisha ee wakhti kasta oo aad nala soo xiriirto. Sidoo kale, sii wado dib-u-eegista Sermorelin Acetate oo waxaad ogaan doontaa inta badan macaamiishayadu inay ku qanacsan yihiin alaabtayada.
Waxaan mar walba kugula talineynaa dhammaan macaamiisheena si aan u iibsano Sermorelin Acetate on our website laakiin ma isticmaali iyada oo aan imtixaan caafimaad. Dhaqtarkaaga oo kaliya waa inuu sameeyaa qiyaasta saxda ah ee xaaladaada wuxuuna sidoo kale kaa caawin karaa inaad xakameyso waxyeellooyinka soo if-baxa ee laga yaabo inay ka soo baxaan marka isticmaalka daroogada sida Sermorelin Acetate. Dhammaan wixii su'aalo ama walaac ah ee la xiriira adeegahaaga caafimaad kahor intaanad bilaabin isticmaalka alaabooyinkeena si aad uga heshid faa'iidooyinka ugu sareeya ee Sermorelin Acetate.
Janvier, S., Cheyns, K., Canfyn, M., Goscinny, S., De Spiegeleer, B., Vanhee, C., & Deconinck, E. (2018). Xasaasiyad daro ah oo lagu soo rogay daawooyinka polypeptide ee ugu badan ee la soo helay ee suuqa Boosniga. Talanta, 188, 795-807.
Weber, C., Krug, O., Kamber, M., & Thevis, M. (2017). Falanqaynta tayada iyo naqshadeynta ee alaabooyinka doping oo lagu qabtay Xuduudka Swiss. Isticmaalka maandooriyaha iyo si xun u isticmaalka, 52(6), 742-753.
Makimura, H., Feldpausch, MN, Stanley, TL, Sun, N., & Grinspoon, SK (2012). Xajinta hormoonka koritaanka hormoonada ee buurnaanta ayaa la xiriirta qiyaasta walxaha LDL iyo HDL. Endokrinology Clinical, 76(2), 220-227.
Oxytocin Acetate: hormoonka jacaylka ee hagaajinaya xiriirkaaga